DAWLADDA INGIRIISKA OO BALAN-QAADAY INAY SOMALILAND KA TAAGEERAYSO QABASHADA DOORASHADDA MADAXTOOYADA | Maalmahanews
DAWLADDA INGIRIISKA OO BALAN-QAADAY INAY SOMALILAND KA TAAGEERAYSO QABASHADA DOORASHADDA MADAXTOOYADA
August 21, 2017 - Written by admin
Hargaysa (Maalimahanews.com)- Dawladda Britain, ayaa sheegtay inay Jamhuuriyadda Somaliland kala shaqaynayso sidii loo qaban lahaa doorashada Madaxtooyada ee muddaysan 13-ka November ee sannadkan, sidaasna waxa daboolka ka qaaday Wasiiru-dawlaha Britain u qaabilsan barwaaqo sooranka iyo horumarinta Afrika, Mr. Rory Stewart oo booqasho ku yimid Somaliland.
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna ku-simaha Madaxweynaha, Mudane C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo shalay xafiiskiisa ku qaabilay weftigaas, ayaa uga warramay xaaladda Somaliland iyo iskaashiga taariikhiga ah ee u dhaxeeya dawladaha Somaliland iyo Ingiriiska.
Waxaa shirkaas labada dhinac si wadajir ah u falanqeeyeen qoddobo ay ka mid ahaayeen kaalmada dhaqaale ee ay Britain siiso Somaliland iyo doorashadda madaxtooyada ee la filayo in ay dabayaaqada sannadkan dalka ka qabsoonto.
Afhayeenka madaxtooyada, Eng. Xuseen Aadan Cigge (Dayr), ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulankaas ka dib, waxaannu sheegay in wasiiru-dawlaha Ingiriiska u qaabilsan barwaaqo sooranka iyo horumarinta Afrika, uu balanqaaday in dawladiisu ay gacan ka gaysan doonto doorashada madaxtooyada ee fooda innagu soo haysa.
“Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna ku-simaha madaxweynaha oo ay wehelinayeen wasiirrada arrimaha dibadda, warfaafinta iyo madaxtooyada, waxa uu kulan la yeeshay wefti ballaadhan oo ka socday dalka Britain, oo uu hoggaaminayey wasiiru-dawlaha arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika, oo ay la socdeen safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya, agaasimaha arrimaha Afrika ee xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda UK,”ayuu yidhi, waxaannu intaas ku daray; “Weftiga iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya xagga horumarinta, nabadgelyada, is-kaashiga caalamiga ah, doorashadda madaxtooyada ee Somaliland ka dhici doonta 13-ka bisha November ee sannadkan 2017-ka.
Waxa kaloo madaxweyne ku-xigeenku warbixin ka siiyay weftiga qaabka ay socdaan qaybinta kaadhka codbixiyeyaasha oo imika ka socota labada gobol ee Sool iyo Sanaag oo ah kuwii ugu danbeeyay dalka oo dhan.”
Waxa kaloo uu intaas raaciyay in madaxweyne ku-xigeenku u bandhigay weftiga Ingiriiska sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Somaliland iyo boqortooyada Ingiriiska; “Waxa kale oo uu madaxweyne ku-xigeenku hoosta ka xariiqay in dawladda Britain ay tahay dawladda taageerada ugu badan siisa Somaliland, oo dhinacyo badan ah. madaxweyne ku-xigeenku waxa uu uga mahadceliyay weftigan ka socday Ingiriiska booqashadda ay ku yimaadeen Somaliland,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Wuxuu sheegay in weftiga Ingiriisku ay balanqaadeen inay Somaliland ka caawin doonaan wixii looga baahdo ee arrimaha doorashadda soo socota, sidoo kale-na ay Somaliland ku amaaneen qabashada doorashooyinkii hore, waxaannu yidhi; “Weftigu waxay balanqaadeen in ay Somaliland ka caawin doonaan wixii looga baahdo qabashada doorashooyinka. waxa kaloo ay jamhuuriyadda Somaliland uga mahadnaqeen siday ugu guulaysatay doorashooyinkii hore ee waddanka ka qabsoomay, tan soo socotanna ay beesha caalamku rejaynayaan in ay si wanaagsan u qabsoonto.”
Dhinaca kale afhayeenku waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shirre, uu weftiga Ingiriiska uga warbixiyay mashaariicda horumarineed ee ka socda dalkan Somaliland, sida mashruuca casriyaynta iyo ballaadhinta ee dekedda Berbera, saldhiga millatari ee ay Berbera ka samaysanayso dawladda Imaaraadka carabta iyo meello kale.
“Wasiir Sacad waxa uu weftiga Ingiriiska uga waramay in dawladda Somaliland ay iyadu isku-tashatay, dhawr jeer oo ay doorashooyinku dib u dhaceenna ay keentay in ururrada qaadhaan bixiyeyaashu ay ku yidhaahdeen Somaliland idinku isku-tashadda. Waxaannu u caddeeyay in dawladdu ku kaliyaysatay oo bixisay lacagta lagu qabanayo doorashadda madaxtooyada ee soo socota,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Ugu danbayn, afhayeenku waxa uu tilmaamay in weftiga UK ay Somaliland ku ammaaneen xasiloonidda, deganaanshaha iyo kala-danbaynta ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland.